फ्रान्स भर्सेस बेल्जियम यस्तो छ इतिहासः को कति बलियो ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
फ्रान्स भर्सेस बेल्जियम यस्तो छ इतिहासः को कति बलियो ?
असार २६ गते, २०७५ - १०:५९
मस्को । रुसमा जारी विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आजदेखि सेमिफाइनलका खेल हुँदै छन् । सेमिफाइनलको पहिलो खेल पूर्वविश्वकप विजेता फ्रान्स र बेल्जियम भिड्ने छन् । खेल नेपाली समय अनुसार राती पौने १२ बजे हुने छ ।
बेल्जियमः थिबाउट कोउटिइस, जान भेर्टोघेन, भिसेन्ट कोम्पनी, थोमस भर्माइलेन, टोबी एन्डरवारेल्ड, यानिक कारास्को, एक्सेल विस्टेल, केभिन डे ब्रुइन, नासेस चाड्ली, इडिन हजार्ड रोमेलु लुकाकु । एजेन्सी
असार २६ गते, २०७५ - १०:५९ मा प्रकाशित